100million – Page 106 – CELE WINGAGAR
ဖာပွန်တိုက်ပွဲအတွင်းမှာ ကျည်ထိမှန်တယ်ဆို တဲ့ သတင်းအမှားကို ပြန်လ ည်ဖြေရှင်း လိုက်တဲ့ မင်းမော်ကွန်း….
July 20, 2021 100million 0
ချစ်လှစွာသော ပရိတ်သတ်ကြီးရေ သရုပ်ဆောင်မင်းမော်ကွန်းကတော့ ဝါရင့်အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဦးဇင်ဝိုင်းရဲ့သားဖြစ်ပြီး အနုပညာမျိုးရိုးရှိတဲ့သူတစ် ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ မင်းမော်ကွန်းကတော့ဗီဒီယိုဇာတ်ကားပေါင်းများစွာ မှာပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး ပရိသတ်အားပေးမှုရရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတ ယ်။ မင်းမော်ကွန်း ကတော့ လူထူတော်လှန်းရေးကြီးမှာတတ်တတ်ကြွကြွပါဝင်ခဲ့ပြီး လမ်းမထိ ထွက်ကာပြည်သူတွေနဲ့အတူ စစ်အာဏာရှင်ကိုဆန်ကျင်ခဲ့တာဘဲဖြစ်ပါတယ်..။ ဒါကြောင့်မလို့ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ခံခဲ့ရပြီး ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာမင်းမော်ကွန်းက လွတ်မြောက်နေရာမှာရောက်နေပြီး ဆက်လက် တေယ်လှန်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ […]
ဝေဖန်မှုတွေများစွာကြားထဲက သမာ အာဇီဝကျ တဲ့ အလုပ်ကိုလုပ်ကိုင်ပြီးရရှိလာတဲ့ ငွေနဲ့ အောက်စီဂျင်ဝယ်ယူရန် လှူဒါန်းလိုက်တဲ့ ဆယ်လီတိုးအောင်….
ပရီိတ်သတ်ကြီးရေ…ဆယ်လီတိုးအောင်ကတော့လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာတွေမှာ ဟာသဗွီဒီယိုတွေတင်ရင်းလူအများသိလြာ ကတာပဲဖြစ်ပါတယ်၊ တိုးအောင်ကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေမှာLiveတစ်ခုလွင့်ရင်းလူအများပိုပြီးတော့သတိထား မိလာတာလဲဖြစ်ပါတယ်။ အခုတစ်ခါမှာလဲဆယ်လီတိုးအောင်က ခိုင်နှင်းဝေရင်သွေးလေးများဂေဟာမှာအောက်ဆီဂျင်အိုးဝယ်ယူဖို့အတွက်အလှူငွေ၂သိန်းကျပ်လှူဒါန်းကြောင်းကိုခိုင်နှင်းဝေရင်ခွင်ရိပ်မြုံဂေဟာအတွက် “တိုးအောင်မှေ အာက်စီဂျင်အိုးလှုဒါန်းရန်အတွက်အလှူငွေနှစ်သိန်းကျပ်လှုဒါန်း၍ လ က်ခံရရှိပါတယ်ရှင်။”ဆိုပြီးရေးသားလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ သမာအာဇီဝကျတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ကိုင်းရင်း ရတဲ့ငွေလေးနဲ့လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ တိုးအောင်ရဲ့အလှူလေးကိုသာဓုေ ခ်ါပေးပါအုံးပရိတ်သတ်ကြီးရေ..။တိုးအောင်တစ်ယောက် အောင်မြင် မှုတွေကိုဒီထက်မကပိုင်ဆိုင်နိုင်ပြီး ဒီထက်မကလှူဒါန်းနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်။ Credit ပရီိတျသတျကွီးရေ…ဆယျလီတိုးအောငျကတော့လူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာတှမှော ဟာသဗှီဒီယိုတှတေငျရငျးလူအမြားသိ လာကွတာပဲဖွဈပါတယျ၊ တိုးအောငျကပွီးခဲ့တဲ့ရကျပိုငျးတှမှောLiveတဈခုလှငျ့ရငျးလူအမြားပိုပွီးတော့သတိထားမိ လာတာလဲဖွဈပါတယျ။ […]
MRTV-4 ကိုအစ်ကိုဖြစ်သူ ရေမွန် အပေါ်စော်ကားလိုက်လို့ ဒေါသထွက် ရတဲ့အကြောင်းပြောပြလာတဲ့ ညီမ လပြည့်ကဗျာ….
ချစ်လှစွာသော ပရိတ်သတ်ကြီးရေ မြန်မာနိုင်ငံမှာဖေဖော်ဝါရီလ (၁) ရက်နေ့ကစပြီးအာဏာသိမ်းမှုကြောင့် လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေဟာယနေ့ထိ အောင်ရှိနေကြဆဲဖြစ် ပါတယ်။ အမှန်တရားကိုမြန်နိုးပြီး ဒီမိုကရေစီကိုလိုချင်နေကြတဲ့ပြည်သူများဟာ အာဏာသိမ်းမှုကိုလက်မခံနိုင်တာကြောင့်လမ်း ထွက်ကာလူထုလှုပ်ရှားမှုတွေပြု လုပ်နေကြပါတယ်။ အနုပညာရှင်အများစုကလဲပြည်သူတွေနဲ့အတူ အမှန်တရားဘက်ကပါဝင်ပြီးတော်လှန်ရေးကြီးမှာအားတက် သရောပါဝင်ခဲ့ပါတယ်..။ ဒီတော်လှန်ရေးကြောင့် မတရားဖမ်းဆီးထားတဲ့ပြည်သူများအပြင် အနုပညာရှင်အချို့လဲ ပါဝင်နေပါသေးတယ်၊ပြီးခဲ့တဲ့လကုန်လောက်တုန်း ကမတရားဖမ်းဆီးထား တဲ့သူတွေထဲမှလူပေါင်း ၂၀၀၀ ကျော်ကိူပြန်လည်လွှတ်မြောက်ပေး လိုက်ပါတယ်။ […]
​ဈေးရောငျးရ ရနျပုံငှေ(၁၀) သိနျးကို အောကျဆီ ဂငျြစကျရုံဆောကျ လုပျရနျ အလှူလေးမှာ ပါဝငျလှူဒါနျးခဲ့တဲ့ ရဗေက်ကာဝငျး…,
ဂီတလောကမှာ အောငျမွငျမှုတှအေခိုငျအမာရရှိထားတဲ့ အဆိုတျော ရဗေက်ကာဝငျးကတော့ လကျ ရှိအခွအေနတှေမှော အလုပျအကိုငျ ရပျနားထားရလို့ စားဝတျနရေေး ခကျခဲနကွေတဲ့ ပွညျ သူတှအေတှကျ လှူဒါနျးမှုတှကေို ဆကျတိုကျပွုလုပျနပွေီး တတျနိုငျသလောကျပါဝငျနတောလညျး ဖွဈပါတယျ။ ပွညျသူတဈယောကျအနနေဲ့ ကရြာတာဝနျထမျးနတေဲ့ ရဗေက်ကာဝငျးကတော့ အခုလို ကိုဗဈ ရောဂါတှေ ဖွဈပှားနတေဲ့ ကာလမှာလညျး မွဈကွီးနားမွို့က […]
သူမရဲ့အဝတ်အစားလေးတွေကို ရောင်းချပြီးရတဲ့ငွေနဲ့လိုအပ် တဲ့နေရာမှာလှူဖို့လုပ်နပေမယ့် ဝေဖန်သူတစ်ချိုရဲ့စကားတွေ့ကြောင့် စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်နေတဲ့ မေ….,
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ…အဆိုတော်မေကတော့ မြန်မာနိုင်ငံတွင် လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ လူထုလှုပ်ရှားမှုများတွင် တက်ကြွစွာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့အတွက် ပုဒ်မ ၅၀၅(က) ဖြင့် တရားစွဲဆိုအရေးယူခံထားရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ တိမ်းရှောင်နေရပေမယ့်လည်း တော်လှန်ရေးအတွက် ကျရာအခန်းကဏ္ဍကနေ ပါဝင်နေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မေကတော့ စစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့ တိုင်းရင်းသားညီအစ်ကို မောင်နှမများနဲ့ ဒီကာလမှာ တကယ်ကို စားဝတ်နေရေးခက်ခဲနေ […]
နမေကောငျးတဲ့ပွညျသူ တှအေတှကျ ကွကျ ပေါငျး ခေါကျဆှဲ တှေ ကိုယျတိုငျလိုကျ လံလှူဒါနျးပေးလိုကျတဲ့ လမငျးကဗြာ….
ပရိသတျတှရေဲ့အခဈြတျော ရုပျရှငျနဲ့ဗီဒီယို ဇာတျပို့ဇာတျ ရံသရုပျဆောငျ မငျးသမီးခြောလေး လမငျးကဗြာ ကတော့ ဒီနမှေ့ာ အလှူလေးတဈခုကို ပွုလုပျခဲ့ပါတယျ။ လမငျးကဗြာတဈယောကျ ဒီနမှေ့ာ ပွုလုပျတဲ့ အလှူလေး ကတော့ နမေကောငျးဖွဈနတေဲ့ ပွညျသူတှအေတှကျ ကွကျပေါငျးခေါကျဆှဲတှလှေူဒါနျးပေးခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။ လတျတလောမှာ ကိုဗဈကပျရောဂါကွောငျ့ နမေကောငျးဖွဈနတေဲ့ ပွညျသူတှမြေားစှာရှိနပွေီး ကပျရောဂါကွီးကို အတူတူတိုကျထုတျတဲ့အနနေဲ့ အားရှိစမေယျ့ […]
ကိုဗဈရောဂါကူးစကျခံရသူ အ ယောကျ(၃၀) အတှကျ ကွကျ ပေါငျးနဲ့ ငါးကွငျး ပေါငျးတှလှေူဒါနျးပေးလိုကျတဲ့ ခိုငျသငျးကွညျ….
ပရိသတျတှရေဲ့အခဈြတျော သရုပျဆောငျ မငျးသမီးကွီး ခိုငျသငျးကွညျကတော့ ဒီနမှေ့ာ ကိုဗဈကူးစကျခံရ တဲ့ လူနာတှအေတှကျ အာဟာရဒါနအလှူလေး တဈခုကို ပွုလုပျခဲ့ပါတယျ။ ခိုငျသငျးကွညျကတော့ ကိုဗဈလူနာတှအေတှကျ အားရှိစမေယျ့ ကွကျပေါငျးနဲ့ ငါးကွငျးပေါငျးတှကေို ဒီနမှေ့ာ လှူဒါနျးပေးသှား မှာပဲဖွဈပါတယျ။ ပွညျသူအားလုံးအတှကျ လှူဒါနျးခငျြပမေဲ့လညျး လောလောဆယျတော့ မနကေ့သူ့ရဲ့ Live ထဲမှာကနေ […]
တစ်တိုင်းပြည်လုံးပူဆွေးဝမ်းနည်းရတဲ့ အာဇာနည်နေ့ ဇူလိုင် (၁၉) မှာကွ ယ်လွန်သွားခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ စည်ဖြိုးရဲ့အဖွား ဒေါ်သန်းအေး….
ချစ်လှစွာသော ပရိတ်သတ်ကြီးရေ စည်ဖြိုးက သူ့ရဲ့မိသားစုကိုအလွန်ချစ်မြတ်နိုးတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ အနုပညာေ လာကမှာလဲ သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါ တယ်။ ခုသူက မော်ဒယ်ခင်လွှမ်းနဲ့ထိမ်းမြားလ က်ထက်ခဲ့ပြီးချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့သမီးလေးရှိနေပါပြီ..။ စည်ဖြိုးကသူ့အဖွားနဲ့သူ့အမေကိုအရမ်းချစ်ခင်တဲ့သူပါ။ သူ့တို့မိသားစုကအလုပ်ကိစ္စဖြစ်ပါစေ အလှူ အတန်းဖြစ်ပါစေ အားလုံးတတ်ညီလက်ညီနဲ့မိသားစုလိုက်ပါ ဝင်ကြတာပါ။ အလှူအတန်းတွေဆို အမြဲမပျက် လှူဒါန်းမှု့တွေလဲတွေ့ရပါတယ်..။ ဇူလိုင် (၁၉) အာဇာနည်နေ့တွင်သူ့ရဲ့အဖွားဖြစ်သူကို စိတ်မကောင်းစွာဆုံးရှုံးလိုက်ရပါတယ်။ မနက်ခ […]
“ဒို့လယ်ဝေး” ပရဟိတလူငယ်များအသင်း ကို အောက်စီဂျင်အတွက် အလှူငွေကျပ်သိန်း(၅၀)ပါဝင်လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ မင်းသားဇေရဲထက်
သရုပ်ဆောင်ဇေရဲထက်ကတော့ကျရာဇာတ်ကောင်တွေမှာအကောင်းဆုံးသရုပ်ဆောင်နိုင်တာကြောင့်ပရိတ်သတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကိုအခိုင်အမာရရှိထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်၊ချောမောလွန်းတာကြောင့်မိန်ကလေးပရိတ်သတ်များရဲ့အသည်းစွဲမ င်းသားအဖြစ်နဲ့လဲအောင်မြင်မှုတွေရရှိထားတဲ့သူလဲဖြစ်ပါတယ်၊ဇေရဲထက်ကအလှူအတန်းတွေမှာလဲသူတတ်နိုင်သလောက်ပါဝင်ကူညီလှူဒါန်းပေးနေပါတယ်။ ယခုတစ်ခါမှာလဲလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကိုဗစ်ရောဂါကပ်ဆိုးကြီးနဲ့ပတ်သတ်ပြီးတော့လဲမြန်မာနိုင်ငံနေရာတော်တော်များများတွေမှာကူးစက်ပျံ့ပွားလျက်ရှိပါတယ်။ဒီရောဂါကြီးကြောင့်အောက်ဆီဂျင်တွေမလုံေ လာက်မှုတွေရှိနေရတဲ့အတွက်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသူတွေလဲမျာစွာရှိနေပါတယ်၊အနုပညာရှင်များအပြင်တတ်နိုင်တြဲ့ ပည်သူများကလဲအလှူရှင်များနဲ့ပူးပေါင်းပြီးအောက်ဆီဂျင်ရရှိဖို့ကိုဝိုင်းဝန်းကူညီလှူဒါန်းပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ သရုပ်ဆောင်ဇေရဲထက်ဟာဆိုရင်လဲဒို့လယ်ဝေးပရဟတိလူငယ်များအသင်းကိုအောင်ဆီဂျင်အတွက်အလှူငွေကျပ်သိန်း(၅၀)လှူဒါန်းကြောင်းကိုရေးသားဖော်ပြထားပါသေးတယ်၊ပြည်သူများအားလုံးလဲရောဂါကပ်ဆိုးကြီးမှအမြန်ဆုံးသက်သာပျောက်ကင်းပါစေလို့ဆုတောင်းပေးရင်းဒီသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Credit သရုပျဆောငျဇရေဲထကျကတော့ကရြာဇာတျကောငျတှမှောအကောငျးဆုံးသရုပျဆောငျနိုငျတာကွောငျ့ပရိတျ သတျတှရေဲ့အားပေးမှုကိုအခိုငျအမာရရှိထားတာပဲဖွဈပါတယျ၊ခြောမောလှနျးတာကွောငျ့မိနျကလေးပရိတျ သတျမြားရဲ့အသညျးစှဲမငျးသားအဖွဈနဲ့လဲအောငျမွငျမှုတှရေရှိထားတဲ့သူလဲဖွဈပါတယျ၊ဇရေဲထကျကအလှူ အတနျးတှမှောလဲသူတတျနိုငျသလောကျပါဝငျကူညီလှူဒါနျးပေးနပေါတယျ။ ယခုတဈခါမှာလဲလကျရှိဖွဈပျေါနတေဲ့ကိုဗဈရောဂါကပျဆိုးကွီးနဲ့ပတျသတျပွီးတော့လဲမွနျမာနိုငျငံနရော တျောတျောမြားမြားတှမှောကူးစကျပြံ့ပှားလကျြရှိပါတယျ။ဒီရောဂါကွီးကွောငျ့အောကျဆီဂငျြတှမေလုံ လောကျမှုတှရှေိနရေတဲ့အတှကျအသကျဆုံးရှုံးခဲ့ရသူတှလေဲမြာစှာရှိနပေါတယျ၊အနုပညာရှငျမြားအပွငျ တတျနိုငျတဲ့ပွညျသူမြားကလဲအလှူရှငျမြားနဲ့ပူးပေါငျးပွီးအောကျဆီဂငျြရရှိဖို့ကိုဝိုငျးဝနျးကူညီလှူဒါနျးပေးနတောပဲဖွဈပါတယျ။ သရုပျဆောငျဇရေဲထကျဟာဆိုရငျလဲဒို့လယျဝေးပရဟတိလူငယျမြားအသငျးကိုအောငျဆီဂငျြအတှကျ အလှူငှကေပျြသိနျး(၅၀)လှူဒါနျးကွောငျးကိုရေးသားဖျောပွထားပါသေးတယျ၊ပွညျသူမြားအားလုံးလဲ ရောဂါကပျဆိုးကွီးမှအမွနျဆုံးသကျသာပြောကျကငျးပါစလေို့ဆုတောငျးပေးရငျးဒီသတငျးကိုတငျဆကျပေးလိုကျပါတယျ။ Credit celeupdatenews
သားလေး သွင်ဦးဟန်(ခ)ကိုကိုး ရဲ့(၂)နှစ်ပြည့်မွေးနေ့လေးမှာ ရင်ထဲ ကတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ မေတ္တာတွေနဲ့စာလေးတစ်ဆောင်ရေးသားလာတဲ့ ပိုးအိအိခန့်…
ပရိသတ်ကြီးရေ ပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်တော် ပိုးအိအိခန့်နဲ့ လက်ရွေးစင်ဘောလုံးကစားသမား အောင်သူတို့ရဲ့ သားဦးလေးဖြစ်တဲ့ သွင်ဦးဟန် လေးကတော့ မနေ့က ဇူလိုင် (၁၉)ရက်နေ့က အသက် (၂)နှစ်ပြည့်မြောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ သားသားလေးရဲ့ (၂)နှစ်ပြည့်မွေးနေ့လေးမှာတော့ မေမေပိုးအိအိခန့်ကနေ သားလေးအပေါ်ထားရှိတဲ့ ရင်ထဲက မေတ္တာတွေနဲ့ စာလေးတစ်စောင်ရေး သားဖော်ပြလာခဲ့ပါတယ်။ “မေမေ့သားလေးရေ Happy Birthday ပါ။ […]
အမိုကျစား ခန်ဓာကိုယျလေးကို အလှယျတကူ ပြော့ပြော့ ပြောငျးပြောငျးနဲ့ ပုံစံမြိုးစုံ လုပျပွလိုကျတဲ့ သငျဇာဝငျ့ကြျော
သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေေ လးမှာ ဧည့်ခန်းတစ်ခုလုံးပြည့်အောင်လာ ကတော့ကြတဲ့ ကလေးတွေကိုကြည့်ပြီး ကျေနပ်ပီတိဖြစ်နေတဲ့ နန္ဒာလှိုင်
အမှနျတကယျ ခကျခဲနတေဲ့ အိမျထောငျစု တှအေတှကျ လိုအပျတာမြား ကို အလြှံပယျ လှူဒါနျးပေးခဲ့တဲ့ နီနီခငျဇျောနဲ့ မိစန်ဒီ
မှေးကာစ ကလေးငယျလေး တဈဦးကို သူမရဲ့ဂဟော အရှမှေ့ာ လာရောကျ စှနျ့ပဈသှားတဲ့ အကွောငျး ပုံတှနေဲ့ တကှ စိတျမကောငျးစှာ ပွောပွလာတဲ့ ခိုငျနှငျးဝေ
သကာရည်လာလောင်းလိုက်လို့ တော်လှန်ရေး မှာ ညောင်း သွားဖို့ ဘယ်တော့မှ မရှိဖူးလို့ စကစရဲ့ အနုပညာရှင်တွေကို အပြစ်မယူတော့ဘူးဆိုတဲ့စကားကို တုန့်ပြန်လိုက်တဲ့ ဒေါင်း